DEG DEG: Kulankii lagu waday inuu maanta dhexmaro kooxaha Man City iyo Man United oo la kansalay – Gool FM
DEG DEG: Kulankii lagu waday inuu maanta dhexmaro kooxaha Man City iyo Man United oo la kansalay
Haaruun July 25, 2016
(Beijing) 25 Luuliyo 2016 – Kulankii saaxiibtinimo ee qeyb ka ahaa International Champions Cup ee dhex mari lahaa kooxaha Man United iyo Man City ayaa la baajiyay sababo la xiriira cimilada dalka Shiinaha.
Afar maalmood ka hor ayay saxaafadu shaacisay isla markaana ay goolFM.net ka soo xigtay inay suuro gal tahay inuu baaqdo kulanka Man United iyo Man City waxaana maanta la xaqiijiay inuu baaqday.
Halkan ka aqri afar maalmood ka hor in la shaaciyay inuu kulanku baaqan karo:
“Dhacdooyinkii dhawaan ee cimilada owgeed, qaban-qaabiyayaasha tartanka iyo kooxaha ka qeyb galaya waxay go’aansadeen in la baajiyo kulanka caawa ee International Champions CuP.”. Ayaa lagu yiri war bixin ay soo saartay Man United.
Man City ayaa iyana soo saartay isla warbixin midan oo kale ah waxayse ku dartay: “Shir jaraa’id ayaa ka dhici doona Stadium (Bird’s Nest) marka ay saacada gudaha tilmaameyso 4.30pm.”.
Juventus oo badalka Paul Pogba ka raadinaysa kooxda Barcelona
Yaa PSG u xiran doona lambarkii uu ka tagay Zlatan Ibrahimovic?